Sawirro: Dhacdo naxdin leh seddex gabadh oo isla dhalatay oo ku dhintay weerarkii xalay,meydad horleh oo saakay la helay | kowtharmedia.com
Home WARAR Sawirro: Dhacdo naxdin leh seddex gabadh oo isla dhalatay oo ku dhintay weerarkii xalay,meydad horleh oo saakay la helay
Sawirro: Dhacdo naxdin leh seddex gabadh oo isla dhalatay oo ku dhintay weerarkii xalay,meydad horleh oo saakay la helay
Waxaa isa soo taraya qasaaraha ka dhashay weerarkii alshabaab xalay ku qaadeen maqaayada pizza house ee dagmada hodan.
Meydad horleh ayaa waxaa laga soo saaray dhismaha maqaayada markii saakay uu soo gaba gaboobay howlgal qaatay mudo dhowr iyo toban saac ah.
Tirada ilaa iyo hada la xaqiijiyay ee ku dhimatay maqaayada waa 25 ruux oo ay ku jiraan kooxdii weerarka soo qaaday.
Dadka dhintay ee saakay meydkooda laga soo saaray maqaayada ayaa waxaa kamid ah 3 gabdho oo walaalo ah iyo mid kaloo dhaawacantay gabdhaha oo afar wada dhashay ahaa ayaa waxaa dhimatay seddex gabadh halka gabadha kalana iyadoo dhaawac ah saakay laga soo qaaday maqaayada.
Gabdhahaan isla dhasha ee maqaayada ku dhintay ayaa meydkooda waxaa laga soo saaray qol yar oo maqaayada kamid ah waxaana ay u muuqatay in toogasho lagu dilay.
Previous PostDEG DEG: Dagaal u dhaxeeya alshabaab iyo ciidamada dowladda oo hada ka socda duleedka dagmada balcad Next PostDaawo Sawirro: Ciidamada gaashaan oo soo afjaray weerarkii shabaab ay ku qaadeen pizza house